बाइबलका कथाहरू: एउटी केटीले शक्तिशाली मान्छेलाई मदत गर्छे - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अटेसो अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा काचिन काजाक काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी केक्ची कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिभ टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नुएर नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बम्बारा बाओले बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलफ वोलाइटा शोना श्वा सर्बियन साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
यो सानी केटी के भन्दैछे, तिमीलाई थाह छ? ऊ यहोवाको अगमवक्ता एलीशाबारे बताउँदैछे। एलीशाले यहोवाको शक्ति पाएर ठूलठूलो चमत्कार गरेको कुरा उसले सुनाउँदैछे। तिमीले चित्रमा देखेको आइमाईलाई यहोवाबारे केही पनि थाह छैन। किनभने ऊ इस्राएली होइन। त्यसोभए त्यो केटी कसरी यो आइमाईको घरमा पुगी त?
यो आइमाई अराम देशकी बासिन्दा हो। उसको पति अरामका प्रधान सेनापति नामान हो। अरामका मान्छेहरूले यो सानी केटीलाई पक्रेर नामानकी पत्नीकी नोकर्नी बनाएका थिए।
नामानलाई कोर भन्ने नराम्रो रोग लागेको थियो। यो रोग लागेको मान्छेको मासु कुहिएर झर्न सक्छ। यसकारण, यो केटीले नामानकी पत्नीलाई यसो भन्छे: ‘मेरो मालिकले इस्राएलमा यहोवाको अगमवक्तासित भेट्नुभए हुन्थ्यो। किनकि उहाँले मेरो मालिकको कोर निको पारिदिनुहुने थियो।’ केही समयपछि त्यो आइमाईले यो कुरा आफ्नो पतिलाई भन्छे।
नामान निको हुन असाध्यै इच्छुक छ। यसकारण उसले इस्राएल जाने फैसला गर्छ। त्यहाँ पुगेपछि ऊ एलीशाको घरमा जान्छ। एलीशाले आफ्नो नोकरलाई पठाएर नामानलाई यर्दन नदीमा सात पटक नुहाउन लगाउँछ। यो सुनेर नामान धेरै रिसाउँछ र भन्छ: ‘इस्राएलको नदीभन्दा त हाम्रै देशका नदीहरू कता हो कता असल छन्!’ यति भनेर नामान आफ्नो बाटो लाग्छ।
तर उसको एक जना नोकरले यसो भन्छ: ‘हजुर, एलीशाले अरू नै गाह्रो कुरा गर्न लगाएको भए हजुरले गर्नुहुने थियो। यसकारण, अहिले पनि उहाँले भनेझैं गर्दा के बिग्रन्छ र?’ नामानले आफ्नो नोकरको कुरा सुन्छ र यर्दनमा सात पटक डुबुल्की लगाउँछ। त्यसपछि उसको शरीर स्वस्थ हुन्छ!
नामान असाध्यै खुसी हुन्छ। ऊ एलीशाकहाँ फर्कन्छ र यसो भन्छ: ‘सारा पृथ्वीमा इस्राएलको परमेश्वर मात्रै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अब मलाई थाह भयो। यसकारण, कृपया यो उपहार मबाट लिनुहोस्।’ तर एलीशाले लिन मान्दैन। एलीशालाई यो उपहार लिनु गलत हो भनेर थाह थियो। किनभने नामानलाई वास्तवमा यहोवाले निको पार्नुभएको थियो। तर एलीशाको नोकर गेहजीले त्यो उपहारको लोभ गर्छ।
यसकारण नामान हिंड्ने बित्तिकै गेहजी पछिपछि दगुर्दै जान्छ र नामानलाई भेट्टाएर यसो भन्छ: ‘एलीशाले भर्खरै आइपुगेका केही साथीहरूका लागि उपहार लिएर आऊ भनेर मलाई तपाईंकहाँ पठाउनु भएको छ।’ तर यो सरासर झूट थियो। यो झूट हो भनेर नामानलाई चाहिं थाह छैन। यसकारण उसले गेहजीलाई केही सामान दिन्छ।
तर गेहजी घर पुग्नुभन्दा पहिल्यै उसले गरेको काम एलीशालाई थाह भइसकेको हुन्छ। किनकि उसलाई यहोवाले सबै कुरा बताउनुहुन्छ। गेहजी आउने बित्तिकै एलीशाले उसलाई यसो भन्छ: ‘तैंले यो खराब काम गरेको हुनाले अबदेखि नामानको कोर तँलाई लाग्नेछ।’ अनि तुरुन्तै, त्यस्तै भइहाल्छ!
हामी यो कथाबाट तीन वटा कुरा सिक्न सक्छौं। पहिलो, हामीले त्यो सानी केटीले जस्तै यहोवाको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। किनकि हामीले त्यसो गऱ्यौं भने यसको नतिजा धेरै राम्रो हुन सक्छ। दोस्रो, नामान सुरुसुरुमा घमन्डी भएजस्तै हामी घमण्डी हुनु हुँदैन। बरु हामी परमेश्वरका सेवकहरूप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ। तेस्रो, हामीले गेहजीले जस्तो झूट बोल्नु हुँदैन। बाइबल पढेर हामी साँच्चै कत्ति धेरै कुरा सिक्न सक्छौं!
२ राजा ५:१-२७.
त्यो सानी केटीले त्यो आइमाईलाई के भनिरहेकी छे, चित्र हेरेर बताऊ।
चित्रमा देखाइएकी आइमाई को हो र त्यो सानी केटी त्यो घरमा के गरिरहेकी छे?
एलिशाले आफ्नो नोकर पठाएर नामानलाई के गर्न अह्राउँछ तर नामान किन रिसाउँछ?
आफ्ना चाकरहरूको कुरा सुनेपछि नामानलाई के हुन्छ?
नामानले दिएको उपहार लिन एलिशा किन मान्दैन तर गेहजीले भने के गर्छ?
गेहजीलाई के हुन्छ र यसबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौं?
दोस्रो राजा ५:१-२७ पढ्नुहोस्।
सानी इस्राएली केटीको उदाहरणले आजका कलिला केटाकेटीलाई कसरी प्रोत्साहन दिन सक्छ? (२ राजा ५:३; भज. ८:२; १४८:१२, १३)
हामीले धर्मशास्त्रीय सल्लाह पाउँदा नामानलाई सम्झनु किन बेस हुन्छ? (२ राजा ५:१५; हिब्रू १२:५, ६; याकू. ४:६)
एलिशा र गेहजी दुवैको उदाहरणलाई दाँजेर हामी के सिक्न सक्छौं? (२ राजा ५:९, १०, १४-१६, २०; मत्ती १०:८; प्रेरि. ५:१-५; २ कोरि. २:१७)